निर्वाचन आयोगले किन लगायो राजनीतिक दलप्रति ‘असहयोग’को आरोप ? « Nepali Digital Newspaper
निर्वाचन आयोगले किन लगायो राजनीतिक दलप्रति ‘असहयोग’को आरोप ?
३१ बैशाख २०७९, शनिबार ०३:४२
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापनको विषयमा असन्तुष्ट जनाए । उनीहरूको क्रियाकलापबाट आयोग चिन्तित र सशंकित भएको उनको भनाइ छ ।
दलहरू तथा उम्मेदवारका क्रियाकलापले केही स्थानको मतदान नै स्थगित गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबीचमा आपसी विवाद, अत्यन्तै सानातिना विषयमा पनि विवाद झाङिदै जाने र अन्ततस् त्यसले अलि उग्र रूप लिने हुँदा केही स्थानको मतदान स्थगित गर्नुपरेको थपलियाले बताए ।
आयोगले सरकारबाट समेत सहयोग नभएको जनाएको छ । निर्वाचनमा सरकारले प्रयाप्त मात्रामा सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको आयोगको ठहर छ । ‘एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपरेको कारण अलिकति चाहेजस्तो सुरक्षा बन्दोबस्त हुन नसकेको हो कि भन्ने आयोगले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ’, थपलियाले भने ।
‘दुई चरणमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । १४ वैशाख र २२ वैशाख गरी दुई चरणमा मतदान गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव थियो । तर, सरकार जेठमा गर्ने प्रस्ताव गरेपछि ३० वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको हो’, प्रमुख आयुक्त थपिलयाले भने ।